ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူရဖို့ရှိနေတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ကော်တင်ဟို Coutinho
8 Nov 2018 . 5:36 PM
ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ကော်တင်ဟို Coutinho ဟာ ကြွက်သားဒဏ်ရာကြောင့် (၂)ပတ်ကနေ (၃)ပတ်ကြားအနားယူရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကလည်း ကော်တင်ဟို ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာ ပေါင်ကြွက်သား စုတ်ပြဲတဲ့ ဒဏ်ရာ ရှိနေတယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည်သက်သာပြုစမှာပဲ အသင်းရဲ့ နောက်ထပ် အဓိကကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကော်တင်ဟို က ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။
ဒီဒဏ်ရာကြောင့်် ကော်တင်ဟို ဟာ လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားမယ့် ဘက်တစ်နဲ့ ပွဲကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာ ကစားမယ့် အက်သလက်တီကိုနဲ့ ပွဲမှာတော့ ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါတယ်။ အသက်(၂၆)နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ကော်တင်ဟို ဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ(၁၆)ပွဲမှာ (၅)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
Photo: The Independent , TSJ101 Sports!
ဒဏျရာကွောငျ့ အနားယူရဖို့ရှိနတေဲ့ ဘာစီလိုနာ ကှငျးလယျလူ ကျောတငျဟို Coutinho
ဘာစီလိုနာ ကှငျးလယျလူ ကျောတငျဟို Coutinho ဟာ ကွှကျသားဒဏျရာကွောငျ့ (၂)ပတျကနေ (၃)ပတျကွားအနားယူရဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးဘကျကလညျး ကျောတငျဟို ရဲ့ ဘယျဘကျခွထေောကျမှာ ပေါငျကွှကျသား စုတျပွဲတဲ့ ဒဏျရာ ရှိနတေယျလို့ အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ တိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ဒဏျရာကနေ ပွနျလညျသကျသာပွုစမှာပဲ အသငျးရဲ့ နောကျထပျ အဓိကကစားသမားတဈဦးဖွဈတဲ့ ကျောတငျဟို က ဒဏျရာပွဿနာနဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတာပါ။
ဒီဒဏျရာကွောငျ့ ကျောတငျဟို ဟာ လာမယျ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကစားမယျ့ ဘကျတဈနဲ့ ပှဲကိုလှဲခြျောမှာဖွဈပမေယျ့ နိုငျငံတကာပှဲစဉျတှေ အပွီးမှာ ကစားမယျ့ အကျသလကျတီကိုနဲ့ ပှဲမှာတော့ပွနျလညျပါဝငျနိုငျဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားနပေါတယျ။ အသကျ(၂၆)နှဈ အရှယျရှိပွီဖွဈသူ ကျောတငျဟို ဟာ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ(၁၆)ပှဲမှာ (၅)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။